Home Wararka Ciidankii gadoodsanaa ee Galmudug oo ka baxay kastamka canshuurta ee Koofurta...
Ciidankii gadoodsanaa ee Galmudug oo ka baxay kastamka canshuurta ee Koofurta Galkacyo
Wararka ka imanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in ciidamada Daraawiishta Galmudug oo dhawaan gadood ka sameeyey Koofurta magaalada Gaalkacyo lagu qanciyay inay isaga baxaan Kastamka lagu qaado canshuuraha ee Koofurta Gaalkacyo.
Ciidamadan gadoodsan ayaa dhawaan la wareegay kastamkan iyagoo ka cabanayay mushaar la’aan la soo deristey.
Wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle ayaa saxaafada u xaqiijiyay in lagu guuleystey in ciidamadan daraawiishta ay dib ugu laabtaan saldhigyadooda ayna baneeyaan kastamka lagu qaado canshuuraha ee Koofurta Gaalkacyo.
Maamulka Galmudug ayaa sheegay in tabashada ciidamadan daraawiishta la tixgelin doono isla markaana ay heli doonaan xuquuqda ka maqan.
La wareegida kastamka koofurta Gaalkacyo ee ciidamadan daraawiishta ayaa ku soo beegantay markii uu ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi.